Xabag-Barsheed: Xiddiga Diiwaannada Laga Qoray Miisaanka Maansada Soomaaliyeed. WQ: Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi) | Gacanlibaaxnews
Xabag-Barsheed: Xiddiga Diiwaannada Laga Qoray Miisaanka Maansada Soomaaliyeed. WQ: Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi)
April 10, 2019 - Written by C M
Waxa 28kii Feb 2019ka gacantayda soo galay Diiwaanka Xabag-Barsheed: Miisaanka Maansada Soomaaliyeed (Midhif-tir iyo Mideyn), waxa qoray Abwaan Cali Maxamed Cabdiraxmaan (Cali Ileeye). Qoraaga ayaa ii hibeeyay, waana nuqul uu si gaar ah u saxeexay. Waan ku milgeynayaa in uu iga dhigo mudanka ay gaadhaan nuqullada ugu horreeya ee Hargeysa ama dhulka Soomaalida loo soo diray, waayo waxa buugga lagu daabacay Qaaradda Yurub. Dhawaan ayuu soo caga-dhigi doonaa Geeska Afrika haddii Alle idmo.
Qoraagu ma sii dhex gelayo dooddii ka taagnayd “Waa kuma Aabbaha Miisaanka Maansada Soomaaliyeed?” ee u dhexaysay Carraale iyo Gaarriye. Waxaase labada aqoonyahan lagu kala saaray dood lagu qabtay magaalada Oslo ee Dalka Norway sannadkii 2009ka, taas oo Gaarriye loogu aqoonsaday Daahfuraha kowaad ama Aabbaha Miisaanka Maansada Soomaalida.
Waxa uu ku bilaabmayaa Ibo-fur sharxaya:
Haddii aynu si kooban u faaqidno toddoba qaybood/geeddi (cutub) ee buuggu xambaarsan yahay, waxa aynu ku hakan doonnaa sheegidda qayb kasta iyo ku-jreyaasheeda. Waayo, ka geyoon maynno haddii aan u gunda-daaddegno dulucda fog ee qayb kastaaba gaarkeeda u faahfaahinayso. Qormadani waa xiise-gelin, hammuuntuna waxa ay bixi doontaa marka uu qof kastaaba iskii uga bogto buugga aan kor-ka-xaadiska u taabanayo. Saw lama odhan jirin “Qof kastaaba gacantiisa ayuu biyo kaga dhergaa”. Imakana waxa aan leeyahay “ruux kastaaba akhriska buugga ayuu ku oon-baxayaa”. Imakaba reer Hargeysow ha igu wareerinnina inaan nuqulkaas maalmo idiin dhiibo!
Aqoonta waa la kala dhaxlaa, marka ay fac aqoonyahani baxaan/gaboobaan, waxa halkoodii gala barbaar cusub oo geeddiga hore u sii wada. Abwaan Gaarriye ayaa yidhi 27kii Julaay 2010ka“Marka ay dhallinyarada qaarkood suaalo naga weydiiyaan Miisaanka Maansada, candhuufta ayaan dib u liqnaa. Waxaanan is idhaahdaa ‘waa kuwii idin beddelayay”.
Baresare Cabdillaahi Diiriye Guuleed Carraale qudhiisa ayaa mar aanu taleefanka ka wada hadalnay sannadkii 2015ka, oo uu waraysi ku saabsan Miisaanka Maansada Soomaalida siiyay Horncable TV, igu yidhi “Waxaad tihiin dadka loo baahan yahay in ay lafa-guraan, eegaan oo faalleeyaan aqoonta aan gudbinayo”.
Marka ay noqoto dhudaha maansada, dhismaheeda, miisaankeeda iyo abla-ablaynteeda waxa aan Abwaan Cali Ileeye ku sunti lahaa aqoonyahan lagu astayn karo “Gaarriyaha Cusub ama Carralaha Cusub”.
Waxa aan hubaa in aan aqoon ka dheefay akhriskiisa, waxaanan filayaa in ruux kastaaba ka heli doono xog uu ku daro ogaalkii hore ee maskaxdiisa ku jiray. Bareyaasha dugsiyada sare ee Somaliland oo hadda dhiga cutub ah Miisaanka Maansada Soomaalida, oo ku jira fasalka afraad ee manhajkii la qoray 2016ka iyo ardayda dugsiyada sareba waxa ay ka korodhsan doonaan tacliin ay ku kabaan aqoontooda.
Gacanlibaaxnews masuul ka ma aha habka iyo curinta qoraalkan, ee waa fikir iyo aragti u gaar ah qoraha. Waxa se Gacanlibaaxnews masuuliyadi ka saran tahay hubinta iyo ka la haadinta ka hor inta aanan idiin soo baahin qoraalka.